Ogaden News Agency (ONA) – OYSU- Norway oo Qabtay Seminaar aad loogu baahnaa
Oslo-30-Oct-2011- Waxaa caawa fiidkii lagu soo gabagabeeyey caasimada Norway ee Oslo, seminaar lagu bixinayey casharo ku saabsan Diyaarinta iyo isku dubo-ridka mashaariicda kala duwan (projects) iyo sida technolojiyadda casriga ah loogu adeegsan karo arintaas.
Seminaarkan oo loo qabtay xubanaha ururka Midowga Dhalinyarada iyo ArdaydaOgadeenya (OYSU) ee Norway, ayaa waxaa casharo qiimo badan ka bixinayey xubno khibrad iyo aqoon dheeraad ah u leh arinahaa aan sare ku xusnay.
Waxaana ugu horeyntii hadal kooban oo ku saabsan ujeedada seminaarka loo qabtay iyo faa’idada uu leeyahay intaba goobta ka jeediyey Mudane Haruun Abdullaahi, oo ah xoghayeha Ururka OYSU-Norway. Xoghayeha ayaa kula dardaarmay xubnaha ururka dhalinyarada ee loo gartay inay ka qeyb-galaan seminaarka inay ka kororsadaan seminaarka aqoon waxtar u yeelan doonta tayeynta iyo horumarinta Ururka OYSU-Norway iyo faracyadda ururku ku leeyahay dunidad dacaladeeda.
Sidoo kale, Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee ururka OYSU-Norway, Mudane Yusuf Abdi, ayaa ku baraarujiyey xubanaha seminaarka ka qeyb-qaadaneyey inay dadaalkooda isugu geeyaan sidii mustaqbalka dhaw waxa ay barteen ugu gudbin lahaayeen xubnaha kale ee aan goobta iman.
Seminaarkan oo ahaa mid lagu baranayey diyaarinta iyo isku-duba ridka mashaariicda iyo adeegsiga teknoologiyada casriga ah, ayaa ah midkii ugu horeeyay noociisa oo la qabto, balse la filayo sida uu sheegay Xoghayeha OYSU-Norway, inay diyaariyeen qabashada seminaaro kuwan lamid ah oo looga faa’iideynayo xubnaha ururka Dhalinyarada.
Hawlaha kala duwanee ay ku talaabsadeen ururka OYSU-Norway, ayaa muujinaya inay yihiin kuwa ku socda dhabbihii loogu talo galay islamarkaana sameynaya horumar iyo wax-qabad la taaban karo.